အပျိုလား..? အအိုလား..? စစ်လား..? မစစ်လား..?.. သိချင်ရင် နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်... ပုံကိုပြောတာနော်..။ - APANNPYAY MEDIA
Apann Pyay 7:20:00 PM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ